ज्योतिष - विकिपिडिया
आकाशीय पिण्डहरूको आन्दोलन र सापेक्षिक स्थितिहरूको अध्ययनलाई मानव मामिला र प्राकृतिक संसारमा प
ज्योतिष भनेको सौर्यमण्डलमा रहेका ताराहरू र ग्रहहरूको आपसी सम्बन्धबाट प्राप्तहुने किरण अथवा तरङ्गलाई सुक्ष्म गणितीय सूत्रबाट अध्ययन गरेर त्यसको यस पृथ्वीमा विद्यमान जड र चेतन माथि पर्ने प्रभावको अध्ययन र विश्लेषण गर्ने अद्वितीय विज्ञान हो।	वेदको प्राकट्य संगै अपौरूषेय रूपमा स्थापित ज्योतिष शास्त्र वेदको आँखाको रूपमा रहेको कुरा सर्व विदितै छ। वेदमा सम्पूर्ण ज्ञान विज्ञान निहित रहेको कुरा कतिपय पश्चिमा विद्वानहरूले पनि स्वीकार गरेका छन्। त्यो ज्ञान र विज्ञानलाई अध्ययन गर्नको लागि ज्योतिषरूपी चक्षुको आवश्यकता छ। वैज्ञानिकहरूले आज कम्प्युटर दूर्बिन र अनेक विश्वविद्यालयको ल्याब वा प्रयोग शालामा वर्षौ बसेर पूरा ब्रह्माण्ड कै अध्ययन गर्दै आएकाछन्।
ज्योतिषशास्त्रको प्रारम्भ मेसोपोटामियाको प्राचिन सभ्यतामा नै भएको थियो। ग्रिस हुँदै भारतमा र नेपालमा पनि त्यही विद्या फैलिएको हो भन्ने विद्वानहरूको धारणा छ। भारतीय उपमहाद्विपमा अहिले अभ्यास गरिँदै गरिएको ज्योतिषशास्त्रमा धेरै विविधता छ, र पश्चिमाको दाँजोमा धेरै कुरा थपिएको पनि छ। यहाँको सामाजिक परम्परा, दर्शन, स्थानीय विश्वास आदिको आधारमा यसको रूप नै अर्को जस्तो भैसक्यो। प्रत्येक ग्रहको आफ्नो प्रकृति हुन्छ र ब्रह्माण्डको आफू रहेको ठाउँअनुसार विभिन्न खालका प्रभाव पार्दछ भन्ने विश्वास यसको आधार हो। पृथ्वी र यहाँका घटनाक्रम वा मानिसहरूमाथि यी प्रभावले निम्त्याउने परिणामको भविष्यवाणी गर्नु नै ज्योतिषशास्त्रको मुख्य उद्देश्य हो।
राशीहरू मूलतः काल्पनिक तारापुञ्जहरू हुन्। सूर्यले पृथ्वीको वरिपरि ब्रह्माण्डमा घुम्ने बाटो वृत्त (वास्तवमा केही दीर्घवृत्त) ३६० डिग्रीको हुन्छ। यसलाई १२ भागमा विभाजन गरिएको छ, प्रत्येक ३०/३० डिग्रीको। यो ३० डिग्रीभित्र जुन नामको तारापुञ्ज पर्दछ, त्यसैलाई एउटा राशीको नाम प्रदान गरिएको हुन्छ। यी राशीका नाम हुन् – मेष, वृष, मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ र मीन। एकमा मेष र एवम् क्रमले बाह्रमा मीन। यिनीहरूले मोटामोटी रूपमा यिनै शब्दहरूले सङ्केत गरेका तारापुञ्जको आकारलाई निर्देशित गरेका हुन्छन् – मेषको मतलब भेडा, वृषको मतलब साँढे आदि। अनि त्यस्तै ग्रहहरू भए सूर्य, चन्द्र, बुध, शुक्र, मङ्गल, वृहस्पति र शनी – जम्मा सात। यीबाहेक पूर्वीय ज्योतिषमा दुईवटा काल्पनिक ग्रहहरू राहु र केतुलाई पनि गणना गरिन्छ। यिनीहरू वास्तवमा चन्द्र कक्ष र सूर्य कक्षद्वारा काटिएका विन्दुहरू हुन्, भौतिक ग्रहहरू होइनन्। त्यसैले जहिले पनि यिनीहरू परस्पर विपरित दिशामा रहेका हुन्छन्। ज्योतिषशास्त्रले राशी र ग्रहहरूको नैसर्गिक सम्बन्ध रहेको मान्दछ। राशीसँग नैसर्गिक सम्बन्ध रहेको ग्रहलाई त्यो राशीको स्वामी भन्ने गरिन्छ – जस्तै
मेष-मङ्गल वृष-शुक्र मिथुन-बुध कर्कट-चन्द्र सिंह-सूर्य कन्या-बुध तुला-शुक्र वृश्चिक-मङ्गल धनु-वृहस्पति मकर-शनी कुम्भ-शनी मीन-वृहस्पति।
राशी स्थिर रहन्छ। ग्रहहरू गतिशील। कुनै खास समयमा ग्रहहरू आफ्नो भ्रमणको क्रममा कुन राशीमा पुगेका हुन्छन्, त्यही आधारमा कुण्डली निर्धारण हुन्छ। सम्बन्धित राशीहरू यी ग्रहका नैसर्गिक घर हुन्। आफ्नो स्वभावअनुसार ग्रहले सम्बन्धित घरको प्रवृत्तिलाई कमजोर पार्ने वा बल दिने गर्दछ। आफ्ना आफ्ना घरमा भएका बेला यिनीहरू बलवान हुन्छन्। ग्रहहरूबीच शत्रुभाव, मित्रभाव वा समभावको सम्बन्ध रहेको हुन्छ। शत्रुको घरमा पुगेको बेलामा ग्रह कमजोर हुन्छ। ज्योतिषशास्त्रको खास रमाइलो यी ग्रहहरूमा आरोपित विभिन्न अर्थहरू हुन्।
मङ्गल ग्रहको रङ रातो हुन्छ, त्यसैले यसले रिस, युद्ध, लडाईँ आदिको सङ्केत गर्दछ। त्यस्तै वृहस्पतिलाई देवगुरु मानिन्छ र वृहस्पतिले शिक्षा र विद्वताको सङ्केत गर्दछ। वृहस्पति प्रधान भएको व्यक्ति विद्वान हुन्छ भनेर ज्योतिषहरू भविष्यवाणी गर्दछन्। शुक्र दानवगुरु हुन्। त्यसैले वृहस्पति शुक्रको शत्रु भयो। शुक्रले यौनको पनि सङ्केत गर्दछ। शुक्र प्रधान हुने व्यक्ति कामी हुन्छ भन्ने गरिन्छ। शनी पाप ग्रह हो। यसको प्रभाव पाप कर्ममा हुन्छ। धन पनि पाप कर्म हो। शनीको प्रभाव भएको बेला धन आर्जन हुने वा खती हुने हुन्छ। चन्द्रमा सुन्दरता, कल्पनाको प्रतिक हो। यसको प्रभावले मान्छेमा सुन्दरता, कल्पनाशीलता आदिको विकास गर्छ। यस्तै यस्तै।
कुण्डलीमा प्रथम, चतुर्थ, सप्तम र दशम घरहरू अर्थात यो कुण्डलीमा १२, ३, ६ र ९ अङ्क भएका घरहरूलाई केन्द्र भनिन्छ। पहिलो घरबाट कुण्डलीवाला व्यक्ति (जातक)को निजी चरित्र अनुमान गरिन्छ। चौँथो घरबाट मातृपक्ष, शरीर आदि, सातौँ घरबाट पति/पत्नी, कुटुम्भ र दशम घरबाट पितृपक्ष, अध्यवशाय आदिको अनुमान गरिन्छ। केन्द्रमा शुभ ग्रह हुनु शुभ सङ्केत हो। त्यस्तै तृतीय, पञ्चम, नवम र एकादश घरलाई त्रिकोण भनिन्छ। द्वितीय, षष्ठम, अष्टम र द्वादश घरबाट नोक्सानी र हानिको फलादेश गरिन्छ। द्वितीय घरले आफन्तसँग विछोड अर्थात परदेशको सङ्केत गर्दछ। (आजभोलि त यहाँ शुभ ग्रह बसेको राम्रो हुन्छ किनभने विदेश त प्राथमिकता हो नि हामीहरूको!) षष्ठम घरबाट स्वास्थ, रोग आदि, अष्टम घरबाट आयु र द्वादश घरबाट धनसम्पत्तिको क्षय विचार गरिन्छ। कुनै ग्रह आफ्नै घरमा बसेको छ भने त्यसलाई स्वगृही भनिन्छ।
पूर्ण फलादेशको लागि धेरै कुराको विचार आवश्यक हुन्छ। एउटा हो दृष्टि। ठाडो दृष्टि र विशेष दृष्टि महत्त्वका हुन्छन्। कुनै पनि ग्रहले आफू रहेको स्थानबाट सातौँ घर (आफू रहेको घरसमेत गरेर घडीको उल्टो दिशामा गन्दा सातौँ स्थानमा आउने घर)मा ठाडो दृष्टि दिन्छ। यो दृष्टिलाई ज्योतिषशास्त्रमा बलवान दृष्टि मानिन्छ। त्यस्तै अर्को दृष्टि हो विशेष दृष्टि। शनी ग्रहले आफ्नो घरबाट तेस्रो र दशम घरमा, मङ्गल ग्रहले चौथो र अष्टम घरमा र वृहस्पतिले पञ्चम र नवम घरमा विशेष दृष्टि दिन्छ। फलादेशमा ख्याल गरिने अर्को पक्ष ग्रहयोग हो। दुई वा दुईभन्दा बढी ग्रह एउटै घरमा रहनुलाई योग भनिन्छ। त्यस्तै कुण्डलीमा नदेखाइने तर महत्त्वपूर्ण कुरा हो ग्रहहरूको उदय र अस्त। राशीमा भर्खर प्रवेश गरेको ग्रह उदाउँदो हो भने, अर्को राशीमा प्रवेश गर्ने बेला भएको ग्रह अस्ताउँदो। उदाउँदो ग्रहको प्रभाव बलवान हुन्छ। ग्रहका आफ्ना भोगकाल हुन्छन्। त्यसलाई दशा भनिन्छ – वृहस्पतिको १६ वर्ष, शनीको १९ वर्ष, केतुको ७ वर्ष, शुक्रको २० वर्ष आदि। दशाहरू पनि विभिन्न खालका हुन्छन् – विंशोत्तरी दशा, योगिनी दशा आदि। योगिनी दशा अलिक बेग्लै हो, तर यो महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। फेरि दशाभित्र अन्तरदशा, प्रत्यन्तर दशा हुन्छन् – एउटा ग्रहको दशाभित्र फेरि सबै ग्रहको भोगकाल विभाजित हुन्छ। त्यसलाई अन्तरदशा भनिन्छ र अन्तरदशालाई पुनः विभाजन गरेर प्रत्यन्तर दशा निकालिन्छ। लग्नमा ग्रहहरूको स्थिति र सम्बन्धित दशा, अन्तरदशा, प्रत्यन्तर दशासमेतको विचार गरेर मात्र कुनै कुराको वास्तविक भविष्यवाणी गर्दछन् ज्योतिषीहरू।(ज्योतिषी भनेको सम्पूर्ण सौरमण्डललाई अध्ययन गरेको, तारा, नक्षत्र र ग्रहहरूको गणितीय पद्धतिबाट विश्लेषण गरी सत्य प्रभाव कुनै मनोविज्ञान र अड्कलन लगाईकन वैज्ञानिक विधि अनुसार सप्रमाण कथन गर्ने क्षमता भएको अभिव्यक्ति हो।)
यस्तै तिथि, बार, महिना, प्रहर, करण, योग आदिलाई पनि फलादेशमा महत्त्व हुन्छ। पूर्वीय ज्योतिषमा नक्षत्रलाई पनि महत्त्व दिइन्छ। चन्द्रमाले पृथ्वीलाई घुम्ने अवधिको आधारमा नक्षत्र गणना गरिन्छ। नक्षत्र जम्मा २७ वटा छन्। एउटा नक्षत्र चार पाउमा विभाजित हुन्छ र एक एक पाउसँग एक एक अक्षर सम्बन्धित हुन्छन्। यस्ता नौ अक्षरहरू एउटा राशीभित्र समेटिएका हुन्छन। यिनै कुनै एउटा अक्षरबाट जातकको नाम राखिन्छ। बाह्र राशीका जम्मा १०८ वटा अक्षरले सबै मानिसको नाम जुराउँदछ! यसप्रकार जातकको राशी पूर्वीय परम्परामा चन्द्रमाको आधारमा निर्धारण हुन्छ। तर पश्चिमी परम्परामा सूर्यको आधारमा निर्धारण हुन्छ। जनबोलीमा एउटै कुरालाई जोड्दै जोड्दै लम्ब्याउने प्रवृत्तिलाई ‘बाह्र सत्ताइस कुरा’ भन्ने चलन छ। त्यो बाह्र राशी र सत्ताइस नक्षत्रलाई सङ्केत गरेको हो। मतलब कि यसको कुरा जति गरे पनि टुङ्गिदैँन। ज्योतिषविद्यामा अङ्कज्योतिष, प्रश्नज्योतिष आदि पनि प्रचलित छन्। परमहंस स्वामी विशुद्धानन्दको योगज्योतिष थियो। त्यस्तै तन्त्रमन्त्रसँग सम्बन्धित धेरै प्रकारका विद्याहरू समाजमा विद्यमान छन्। तन्त्रसँग सम्बन्धित प्रेतसाधना, मसानसाधनादेखि लिएर धामी, झाँक्री सबैमा आखत हेर्ने, भविष्यवाणी गर्ने विद्या पाइन्छ।
ज्योतिष विज्ञान आफूमा पूर्ण सत्य विज्ञान हो यसमा कसैको शंका नरहोस् भन्ने भनाई ज्योतिषीहरूको रही आएकोछ। तर समयसंगै यसमा धेरै विकारहरू आएका छन्। यो विद्यालाई आज पैसा कमाउने भाडाको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। आदि युगमा धेरै ऋषिहरूले धेरै विस्तृत विशाल विज्ञानको रूपमा विकास गरिसकेको ज्योतिष शास्त्र आज थोरै व्यक्तिहरूको गलत व्यवहारका कारण मृत तुल्य हुन पुगेको छ। नौ ग्रह र अठाईस नक्षत्रका नाम सम्म नजान्ने व्यक्तिहरू आफ्नो नामको अगाडि श्री ज्योतिषविज्ञ,ज्योतिष भास्कर, डक्टर सम्म लेख्न पछि पर्दैनन जसको फल स्वरूप आज यो दिव्य विज्ञान ओझेलमा परेको हो त्यसका केही दोषी हामीहरू पनि हौं। किनकि यस विषयलाई कमाई खाने भाडाको रूपमा प्रयोग गर्नु पूर्व हामी गहन अध्ययन गर्न चाहदैनौ। दुईचार वटा श्लोक रटेको भरमा मानव जीवन र सम्पूर्ण चराचरको मनगढन्त फलादेश गर्न थाल्दछौ संयोगबस कसैको मिल्छ, तर अधिकतर मिल्ने कुरामा तपाईँ हामी आफै ग्यारेण्टी गर्न सक्दैनौ।; यसको अपवादमा दुईचार जना विद्वानहरू हुनुहुन्छ जसलाई उपरोक्त श्रेणीमा राख्न मिल्दैन। आज जसरि विज्ञानका विद्यार्थीहरूले नयाँनयाँ खोज र सिर्जनाहरू गरिरहेका छन्, त्यस्तै यसमा पनि विद्यार्थिहरूको अथक मिहेनत र खोजको आवश्यकता छ। यदि सही ढङ्गले तपाईले यो शास्त्रको अध्ययन गनुभयो भने तपाईँ एउटा विश्वासिलो वैज्ञानिक पनि हुनुहुनेछ।कुनै व्यक्तिविशेषको मनगढन्त ग्रन्थ अध्ययन गरेर मानवजीवनको पूर्ण भविष्यफल कथन गर्ने ग्यारेण्टी गर्नु्, जुन अतीव गलत परम्परा हो, यसको न्यूनीकरण गर्नु अति आवश्यक छ।
३ ज्योतिषका हाँगाहरू
३.३ अंक ज्योतिष
३.४ प्रश्न ज्योतिष
३.५ सकुन विचार
३.६ स्वप्न विचार
वेदका छ अङ्ग मानिएका छन् । तिनका नाम शिक्षा, कल्प, निरूक्त, व्याकरण, छन्द र ज्योतिष हुन्।
यद्वत शिखा मयुराणां नागानां मणयो यथा।। तद्वद वेदांग शास्त्राणां ज्यौतिषं मूधर्नि तिष्ठति।।।।
वेदका छ अंगमा ज्योतिष शास्त्र नेत्र भएका कारण सर्व श्रेष्ठ रहेको कुरा उपरोक्त श्लोकलपुष्टि गरेको छ।
वेद अपौरूषेय छ तसर्थ वेदांग भएका कारण ज्योतिष पनि अपौरूषेय भयो अर्थात श्रृष्टिको प्रारंभबाट नै प्रचलित रहि आएको सत्य विज्ञानको रूपमा रह्यो। कालक्रम अनुसार ज्योतिष शास्त्रका अठारह प्रणेताहरू भएका छन्। यथाः-
ज्योतिष विद्या जसलाई ज्योतिष शास्त्र पनि भनिएको छ। यो विद्या निम्न विषय वस्तुहरूमा आधिरत हुन्छ। ज्योतिष शास्त्रको पौराणिक ग्रन्थ भृगु संहिता, वृहद ज्योतिष सार, मुहुर्त चिन्तामणी, सिघ्रबेध आदी ग्रन्थका अनुसार निम्न विषय वस्तुहरूमा आधारीत पाईएको छ।
मुख्य लेख: राशि-चक्र
पृथ्वीलाई सूर्यको परिक्रमा पुरा गर्न पुरा १२ महिना लाग्छ । यो अन्तरालमा पृथ्वी र सूर्यको दुरी परिक्रमाको बाटो आदीमा समय फरक पर्दै जान्छ । करिब १ महिना सम्म पृथ्वी र सूर्यको दुरी समान रहेको रहेको पाइन्छ । यो हिसाबले खगोल शास्त्रीहरूले पुरा एक महिना सम्म सूर्य एकै रेखामा विचरण गरेको तथ्यलाई औँल्याउदै सूर्यको यो अवस्थालाई एक "राशि"को नाम दिएका छन् । राशिहरू १२ वटा हुन्छन् । सूर्यले एक महिना सम्म एक राशिमा विचरण गर्छ भने चन्द्रमाले एक राशिमा करिब २.५ (ढाइ) दिन भोग गर्छ । यसकारण ज्योतिषविधहरूले राशिलाई क्रमश: "सूर्य राशि" र "चन्द्र राशि" दुई भागमा बिभक्त गरेता पनि हिन्दू ज्योतिष प्रमाणीकरणका अनुसार चन्द्र राशिलाई नै मान्यता दिईएको छ।  राशिहरूका नाम यस प्रकार छन् :-
* राशि-नाम English राशि चिन्ह (नेपाली)
2 वृष राशि Taurus
6 कन्या राशि Vigro
8 वृश्चिक राशि Scorpio
मुख्य लेख: नक्षत्र
नक्षत्र खगोलवीधहरूका अनुसार साना ठुला ताराहरूको समुह हो। हिन्दू ज्योतिषका मतानुसार नक्षत्रहरू निम्नानुर २७ वटा छन्।
एक नक्षत्र ६० घडी अथवा २४ घण्टाको हुन्छ।
सौर्य मण्डलमा धेरै तारा, नक्षत्रहरूको समुह छ। ति मध्य केही प्रमुख तथा ठुला आकार भएका र सूर्यको वरिपरी एक निश्चित घेरा बनाएर परिक्रमा गर्ने पिण्डहरूको समूहलाई खगोलशास्त्रीहरूले ग्रहको नाम दिएका छन्। प्राचिन कालका विद्वानहरूले ७ वटा ग्रहहरू मात्र भएको प्रमाणिकरण गरेका थिए। उनिहरूको मतानुसार चन्द्रमा पनि एक ग्रह हो। तर पृथ्वीलाई ग्रहमा राखिएको छैन। पछि आएर ज्योतिषहरूले ९ वटा ग्रहहरू भएको प्रमाणीत गरे। त्यस्तै खगोलविधहरूले पनि ९ वटा ग्रहहरू भएको प्रमाण गरे। तर हिन्दू ज्योतिषविध र पश्चात्य विद्वानहरूको मतानुशार ग्रहहरूको बारेमा फरक मत देखिएको पाइन्छ। खगोलविधहरूका अनुसार ग्रहको संख्या बढ्ने सम्भावना देखिएको छ। अन्तरिक्षा सम्बन्धको खोज कार्यमा संलग्न "नासा" का खगोलवीधहरू अन्तरिक्षामा अरु ग्रहहरूको सम्भावना बताउदै ग्रह खोज कार्यमा जुटेका छन्।
खगोल विज्ञान अनुसार प्रमाणीकरण गरिएका ग्रहहरूको सूचि तालिकाको लागि जानकारी प्राप्त गर्न
मुख्य लेख: ग्रह
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार ग्रहहरूको बारेम जानकारी प्राप्त गर्न
मुख्य लेख: ग्रहहरू
मुख्य लेख: तिथी
चन्द्रमाले पृथ्वीको परिक्रमा गर्छ। चन्द्रमालाई पृथ्वीको परिक्रमा पुरा गर्न करिब एक महिनाको समय लाग्छ। यसै क्रममा कहिल्यै सूर्य तथा पृथ्वीको सन्मुख दिशा त कहिल्यै विपरीत दिशामा पर्ने भएकाले कहिले पूर्ण रूपमा देखिन्छ भने कहिले देखिदै देखिदैन, कहिल्यै आधा, कहिल्यै सानो अथवा ठूलो आकारको देखिन्छ। यसरी चन्द्रमाले कहिले दृष्य कहिल्य अदूष्य हुने क्रियालाई चन्द्रमाको कला भनिन्छ। चन्द्रमाको कलाको आधारमा चद्रमा पुरा देखिएको दिनलाई पूर्णीमा(पूर्णी) र अदृष्य भएको दिनलाई आमावश्या(औँशी) भनिन्छ। यसै गरी औँशी देखि पूर्णि सम्म पुग्न चन्द्रमाले १६ दिन लगाउँछ। यि १६ दिनको अलग अलग नाम दिएको छ जसलाई तिथि भनिन्छ। तिथिहरूका नाम यस प्रकार छन्:
यि १६ तिथी दुई पक्ष शुक्ल पक्ष र कृष्ण पक्ष दुई अलग अलग पक्षमा औँशी पक्ष र पूर्णी पक्षमा पर्छन्।
ज्योतिष विज्ञानलाई विभिन्न भागमा विभाजित गरिएको छ।
मुख्य लेख: वास्तुशास्त्र
वास्तुशास्त्र ज्योतिष विद्याको एक हाँगो (विभाग) हो। जसमा भवन निर्माण सम्भन्धको सम्पूर्ण जानकारी दिएको हुन्छ। यसले भवन निर्माणकोलागी ठाउँको छनौट, दिशा निर्देशन, भवन निर्माणमा भएका गल्तीहरूको दोष निवारण आदीको बारेमा जानकारी दिन्छ।
मुख्य लेख: सामूद्रीकशास्त्र
सामुद्रीक शास्त्रले शरीरका विभिन्न अङ्गहरू जस्तै:- हात, खुट्टा, निधार आदीका रेखाहरूको आधारमा व्याक्तीको भूत, भविष्य र वर्तमान तिनै कालको फल बताउन सक्ने ज्ञान दिन्छ।
मुख्य लेख: अंक ज्योतिष
अङ्क ज्योतिषले व्यक्तीको नाम, जन्म मिति, परिवार संख्या आदीको संख्यामा जोड, घटाउ, गुणन, भाग गरेर व्याक्ती विशेषको त्रिकालको फल घोषणा गर्न सकिन्छ।
मुख्य लेख: प्रश्न ज्योतिष
प्रश्न ज्योतिषले कुनै पनि व्यक्ती विशेषको बारेमा सोधिने प्रश्नको आधारमा फलको घोषणा गर्न सकिने जानकारी दिन्छ।
मुख्य लेख: सकुन विचार
सकुन विचारले विभिन्न प्रकारका लक्षण कुलक्षणको आधारमा सकुन अपसकुन निकालेर फलको घोषणा गर्न सकिने ज्ञान दिन्छ।
मुख्य लेख: स्वप्न विचार
स्वपन विचारले व्यक्तिले निदाएको बेला देखको सपनाको आधारमा फलादेश घोषणा गर्न सकिने ज्ञान दिन्छ।
मुख्य लेख: फलादेश
जन्म समयको आधारमा राशीहरूको घर निर्धारण गरेर र अन्य जानकारीको आधारमा गरिने ब्यक्तिको भविश्यवाणी।
↑ वृहद ज्योतिष सार
↑ खगोल विज्ञान
विकिमिडिया कमन्समा ज्योतिष सम्बन्धी अन्य सामग्रीहरू रहेका छन्।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=ज्योतिष&oldid=1054556" बाट अनुप्रेषित
अन्तिम सम्पादन ११ जनवरी २०२२, १५:३९